Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 2 - Blockchain News
Kurume 9, 2018 arun
Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 2
Vanofunga kuti zvinokwanisika kupfuma nokukurumidza pamusoro cryptocurrencies
Cryptotrader Peter McCormack vakaongorora zvinhu pamusoro crypto pamusika uye vakasvika pakugumisa kuti dzakawanda itsva crypto iyi vanouya kumusika nechivimbo chakakwana kuti uchakwanisa nokukurumidza kupfuma. Maererano McCormack, ichi zvinotungamirira kwete chete mwoyo, asiwo kuti nokukurumidza kurasikirwa mari.
zvinotarisirwa, kana musika ari kusangana ngaatore-kure kumwedzi, vanoita zvitsva zvakawanda kuuya nayo, vachitarisira kuwana nyore purofiti. Uyezve, vanonyora pamusoro payo zvose mashoko, uye vaya vanokwanisa kuwana muhoro wakanaka, udza pamusoro kwavo kubudirira nyaya. Asi matema vanoberekwa: zvakaitika aine dot-ru sefuro, uye ndiye aiva 2008 redzimba dhudhumira.
zvisinei, crypto musika hakushandi pasi Zano pakarepo zvakaoma. Uyu pamusika dzokufungidzira, umo vamwe vatambi vaigona kukurumidza kupfuma. Vakawanda vakakurumidza kukanganwa upfumi hwavo zvose. Crypto musika, sedzimwe musika chero, ndizvo cyclical, izvo zvinoreva kuti pashure nguva kukura, kupunzika nguva zvichaita hazvo kuuya. Uye sezvazvakange zvakaita 2013: pamusoro mukuru purogiramu cryptology, iyi sokunge kwekanguva kukura duku, pashure iyo paiva donhwe vasingakoshi.
zvisinei, saizvozvo, muna November 2013 ari capitalization pakati crypto musika rakakura nokukurumidza pamusoro colour yokusvika vatambi vatsva vakanga paakapiwa mu bitcoin – mari itsva echimurenga nezveramangwana. saka, ne December 4, 2013 nhamba akanzwika kunonyanyisa ayo okutanga $ 15.7 bhiriyoni. Uye December 19, capitalization akawira zvikuru anenge zviviri – kuti $ 6.9 bhiriyoni. musika Crypto akatora makore anopfuura maviri kuwanazve uye vasvike kare ichava nenguva yakanaka.
Izvi zvinhu zvinogona kudzokorora, kunyange zvazvo nhasi kumusika nokuti crypto mari yakasiyana chaizvo chii takaona 2013: Vatambi vane mamwe mashoko pamusoro payo, uye mararamiro yava kutanga uye kuwana hunoshandiswa itsva. Asi, ichi chinhu dzokufungidzira musika kuti anogona kuparara chero nguva. Ehe saizvozvo, pane mienzaniso sei unogona kupfuma kutsanya pairi, zvisinei, mikana kurasikirwa upfumi zvose nokuda havaratidzi akaronga mubhizimisi nzira dziri nguva zhinji dzakakwirira.
Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 1 Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 3
nyora: Richard Abermann
Mumakore gore, IC ...
Blockchain News 21.06.2018
Govment Korean anoronga ...
Previous Post:Zvakakanganiswa Сrypto makambani. mhosho 1
Next Post:Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 3
Blockchain News 31.08.2018